China DP converter DP to DVI converter dia manohana mpanamboatra sy mpamatsy 1080p |Wellink
Ny converter DP dia mpanova feo sy horonan-tsarimihetsika avo lenta izay mamadika fitaovana famoahana DP ho an'ny DVI interface, izany hoe afaka manova ny mari-pamantarana amin'ny ordinatera sy ny fitaovana misy DP ho lasa famantarana DVI.Ny tranon'ity mpanova ity dia vita amin'ny fitaovana ABS matanjaka.Ny endrika dia tsotra sy stylish.
DVI VEHIVAVY 1080p
Varahina madio tsy misy oksizenina fototra
Ampifandraiso amin'ny fitaovana fampisehoana DVI ny fitaovana interface tsara DP
DP Video fampidirana endrika: 480I/576I/480P/576P/720P/1080I/1080P/60HZ
Fanohanana vahaolana 2
DVI Output fanapahan-kevitra: 480I/576I/480P/576P/720P/1080I/60HZ
* Tohano ny fampidirana DP interface tsara iray ary ny famoahana DVI iray;
* Fanohanana DVI1.2 dikan-teny, fanohanana CEC, mifanaraka amin'ny HDCP;
COMPACT DESIGN - Ny adaptatera Moread DP mankany DVI portable dia mampifandray birao na solosaina misy seranan-tsambo Display (DP, DisplayPort ++, DP ++) amin'ny monitor, display, projector, na HDTV miaraka amin'ny fidirana DVI;Ampidiro ao anaty kitaponao na paosinao ity gadget maivana ity mba hanaovana famelabelarana momba ny raharaham-barotra, na hanitatra ny toeram-piasanao mba hampitomboana ny vokatra;Mila tariby DVI (mivarotra misaraka)
FAHASALAMANA TSY MAINTSY - Ny mpanova DisplayPort lahy ho DVI vavy dia manohana ny famahana horonan-tsary hatramin'ny 1920x1080@60Hz (1080p Full HD) / 1920x1200 ary ny famahana sary amin'ny PC hatramin'ny 2048x1152@60Hz;Ny connector DP vita amin'ny volamena dia manohitra ny harafesina sy ny abrasion ary manatsara ny fampitana famantarana;Mampitombo ny faharetan'ny tariby
STABILITY SUPERIOR - Ny connecteur hidin-trano DisplayPort miaraka amin'ny latches dia manakana ny fiatoana tsy nahy, ary manome fifandraisana azo antoka;Ny bokotra famotsorana amin'ny mpampitohy DisplayPort dia tsy maintsy tsindriana alohan'ny hanesorana azy;TSY mpanova bi-directional izy io ary tsy afaka mampita famantarana avy amin'ny DVI mankany amin'ny DisplayPort
FAMPISEHOANA BE LOATRA - Ny dongle DisplayPort mankany DVI-D dia mifanaraka amin'ny ordinatera DisplayPort, pc, kahie, ultrabook, HP, Lenovo, Dell, ASUS;Ampifanaraho amin'ny Mirror Mode ny fanaraha-maso mba handikana ny fampisehoana voalohany ho an'ny fandefasana horonan-tsary na lalao;Ampifanaraho amin'ny Extend Mode ny monitor mba hanitarana ny faritra desktop
1 taona W
Fampisehoana azo itokisana miavaka
Ny conducteur varahina miboridana sy ny foil & braid shielding dia manome fampisehoana tariby tsara kokoa sy fifandraisana azo itokisana
Fitaovana fampidirana: Loharano famantarana misy interface tsara DP, toy ny solosaina sy fitaovana hafa misy DP interface, sns.
Fitaovana fampiratiana: Asehoy ny fitaovana miaraka amin'ny seha-pifandraisana fampidirana DVI, toy ny fanaraha-maso, fahitalavitra ary projecteur.
Fanontaniana:Mifanaraka ve ity adapter dvi-d tokana ity?
Valiny:Tsy fantatro marina.Afaka mifandray bebe kokoa ianao ary manontany azy ireo fa mamaly haingana izy ireo.Cable tsara kalitao koa.Nampiasa tariby aho satria tsy manana fiafaran'ny karatra video aho.
Fanontaniana:Mila apetraka mpamily ve ity adapter ity?
Valiny:Tsia.Fifandraisana ara-batana izany.Tsy mila mpamily mihoatra ny mpamily karatra grafika mahazatra anao.
Fanontaniana:Adapter passive sa active ve ity?
Valiny:Izy io dia passive.
Fanontaniana:Hanohana 1920 x 1080 amin'ny 144hz ve izany?
Valiny:Izy io dia manohana ny fanapahan-kevitra hatramin'ny 1920x1080@60Hz.
Fanontaniana:Manana pc misy dvi out aho ary monitors vaovao misy displayport in. mety havadika ve ny dvi ho displayport?
Valiny:Tsia. TSY mpanova bi-directional ity ary TSY afaka mamadika famantarana avy amin'ny DVI ho DisplayPort.
teo aloha: 10 in 1 Type-C HUB, USB3.0, Type-C PD 100w, VGA(1080P), Audio 3.5mm ho an'ny macbook
Manaraka: Mini DP ho HDMI mpanova